शब्दकोश: कालो चश्मा : 'Made in Nepal'
टोलटोलमा त्रासदीको छाया,
घरघरमा विरक्तिको घना धुवाँ,
व्यक्ति-व्यक्तिमा हैरानीको आवेग ।
सिङ्गो देश नै रनथन्याउने सङ्कटकाल !
अहिलेको नेपालको कथा र व्यथा यही हो । 'यहाँ के छैन सबथोक छ' भन्ने कवि भूपी शेरचनको मेरो चोक कविताको भावधारा झैँ परिदृश्य व्याप्‍त छ । देशमा हेर्दा के छैन र के चाहिँ छ त का बीचमा उत्तिकै टक्कर देखिन्छ । राजधानीको जीवन हेर्दा, कहिले जुलुश कहिले र्‍याली त कहिले सवारीसाधनकै विरोधका कारण जाम हुने अस्तव्यस्त सडक पनि छ । उता फोहोर उठाउने महानगरपालिकाका कामदारहरूका हडतालका कारण त्यही सडकमै हप्‍ता-दुई हप्‍तादेखि थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुर पनि छ ।
विद्युत् सङ्कटकालले मुलुकको जसोतसो धानिएको प्राण हावा खुस्किएको बेलुनमा परिणत भएको मात्र छैन, त्यो बेलुन समग्र हिस्सामा छ्‌यान्द्रैछ्‌यान्द्रा चिरिँदै गएको छ । टाल्नुपर्ने कुरा एकबाट बढेर अनेक हुन पुगेको छ । निजी तथा सार्वजनिक विभिन्न कार्यालय, शिक्षण संस्था आदिका प्रशासनिक काममा अवरोधले बौद्धिक पाटो कति शिथिल र शून्यताबाट गुज्रिएला, यसको लेखाजोखा छैन । पाँच वर्षम्मको विद्युतीय सङ्कटको भविष्यवाणी यसैगरी कहाली लाग्दो रूपमा सामना गर्नु परिरहे के होला ? आर्थिक क्रान्तिको राग अलाप्ने 'क्रान्तिकारी सरकार' विद्युत् लोडसेडिङको छिर्के हनाइमा परेर नराम्रोसँग बल्ढ्याङ खाने छाँट देखिएको छ । लघु उद्यमदेखि ठूला कलकारखाना र औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतका बन्द-व्यापार, होटल व्यवसायमा लोडसेडिङको लोडले 'काम पुगेको' छ । एउटा- मैनबत्ती उद्योग चम्किएर त आर्थिक क्रान्ति हुँदैन । उद्योगहरूको सञ्चालन नियमित त परै जाओस् कतिपय ठाउँमा ठप्पप्रायः बनेको छ । प्रतिफलमा, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महँगीको उकालो लगातार चरम बन्दै गएको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले सोध्ने 'किन यस्तो ?' भन्ने प्रश्‍न नै अनावश्यक बन्न थालिसक्यो । 'लोडसेडिङले, फ्याक्ट्री नै चल्न पाउँदैन रे !' आदि रेडिमेड जवाफ व्यापारी-पसलेको मुखमा सुहाउँदो आभूषण बनेर झुन्डिइसक्यो ।
राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री-मन्त्री निवास र 'स्वायत्त सिंहदरवार प्रदेश' आदि विशेष ठाउँमा झिलझिलाकार बन्ने बत्ती अस्पताल, कारागारजस्ता अति संवेदनशील स्थानमा साइतअनुसार झुल्किन्छ । राज्यको आम रुपान्तरणको लागि गणतन्त्रले मात्र पुग्दैन, जनगणतन्त्र चाहिन्छ भन्दै दिनदहाडै एकपछि अर्को गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि हिंस्रक धङधङी वर्षाउने माओवादीले आ फ्नो नेतृत्त्वको सरकारकै पालामा नेपाली घरदैलोमा ऐतिहासिक रूपले अन्धकारको प्याकेज पेश गर्‍यो । मुलुकमा विद्युत् सङ्कटकाल घोषणा गर्नु नै यिनको अग्रगामी छलाङ मान्नुपर्ला । विद्युत् ऊर्जा आज रोप्यो दुई-चार महिनामै बुरुरु फल्ने र परिमाण बढ्दै जाने च्याउ खेती होइन । बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै यसको निरन्तर वृद्धि पनि आवश्यक हुन्छ । यसअघि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा भईकन पनि उल्लेखनीय ठोस काम हुन नसक्नु हामीले आज मुलुकै पछुताउने प्रसङ्ग बन्यो । आज यति भुक्तमान खेपिसकेपछि पनि थप विद्युत् आयोजनाको लागि लगानीकर्ता/व्यवस्थापन आदिमा विशेष ताउरमाउर जनाउन सकिएन भने पुस्ता दरपुस्तामा यो पछुतोको लहरे खोकी सरुवा भइरहनेछ ।
तै जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूको टाउको अन्धकारमय यस राष्ट्रिय समस्याका कारण दुखेको होला, यी नयाँहरूले त जनताको दुरावस्थाप्रति समभाव राख्लान् भन्ने सोचेको । त्यस्तो सोच्नु पनि हाम्रो अन्त्यहीन आशा मात्र रहेछ । महाभारतका नेत्रहीन धृतराष्ट्र झैँ सबै परिस्थितिदेखि सरोकारविहीन हाम्रा प्रधानमन्त्री आफ्नै जुँगे लडाइँको एकोहोरो भाका झिक्दै खुला सभामा के भन्छन् ? सुन्नुस्- 'वर्तमान सरकार विगतको सरकारको पुनरावृत्ति होइन, यो भिन्नैखाले परिस्थितिबाट बनेको सरकार हो । प्रतिक्रान्तिकारीहरूले सरकार ढाल्न खोजे त्यसको भोलिपल्ट ठूलो विद्रोह हुन्छ र सत्ता नेपाली जनताले कब्जा गर्नेछन् ।' यिनका नेपाली जनता वाइसीएल हुन् कि को हुन्, धेरै पहिलेदेखि बुझ्न गाह्रो परिरहेको विषय हो । वञ्जर जङ्गलबाट सुविधाभोगी महलको राजसी ठाँटबाँटमा तैरिएका माओवादीले आफूनेतृत्वको सरकारलाई पनि देश र जनताको विरहपूर्ण दैनिकीको सवालमा अन्धो र बहिरो तुल्याउँदै लगेको भान हुन्छ । पर्यटनलाई राज्यको एक प्रमुख आर्थिक स्रोत बताउने नयाँ सरकार यसको प्रवर्द्धनमा लाग्नुसाटो हप्‍ता-पन्ध्र दिनमा लोडसेडिङको नयाँ तालिका नेपाली जनको हातहातमा थमाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई आशीर्वाद दिइरहेछ । मानौँ लोडसेडिङको यही तालिका नै हो सुदृढ नेपाल बनाउने उच्चस्तरीय खाका, जसलाई हरेक नेपालीले मन्त्र जस्तै जप्नु आजको आवश्यकता हो !
पर्यटक जस्तै सट्याकसुटुक गरी आउने बत्तीले चार्ज गर्ने मेलोमेसो र पर्याप्‍त समय पटक्कै नहुने अवस्थामा ब्याट्री र इन्भर्टरको कुरा छाडौँ, रातोदिन जेनेरेटरले कतिन्जेल धान्लान् मान्छेहरूले !? धन्न तेलजन्य इन्धनको यसवेला खडेरी छाएको छैन ! नत्र त इन्डियन आयल कर्पोरेसनको 'निगाह' नपाएको खण्डमा हाम्रो सरकारले अवश्य समग्र ऊर्जा सङ्कट घोषणाको पनि लाचारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नेथ्यो । हुनेले जेनेरेटर र ब्याट्रीको जोरजाम गरेर केही न केही उपाय अपनाउँलान्, तर ढोक्से-भकारीको चेप र भण्डारकोठाको ध्वाँसे कुनामा अर्पण गरिसकेको एक जमानाको लम्फा, ढिब्री र टुकीमारा आखिर तिनै सर्वसाधारण र सर्वहारालाई । गणतन्त्रको प्रज्वलित आँगनीमा हिजोआज जतासुकै 'यही हो बा नयाँ नेपाल !' भन्ने जोकतन्त्र खूबै फस्टाएको छ । फस्टाउनलाई अरू चिज रहृयो नै कहाँ र ?
१६ घन्टे लोडसेडिङ लागू हुने अघिल्लो साँझ शनिबार काठमाडौँको सडकमा लरखराउने जोसुकैले नागरिक जीवनका विचित्र रङहरू देख्‍न सक्थ्यो । सबैको ओठमा लोडसेडिङको लप्काले कलेँटी छुटाएको थियो । पुर्णरुपेण विद्युतीय माध्यमका पसलहरूः साइबर क्याफे, फोटोकपी सेन्टर सञ्चालकका निधारमा नपुरिने चाउरीका रेखा गहिरिँदै गएको देखिन्थ्यो । मुख्य चोक र सडकछेउ ढाड सेकाउने कोठाभाडा बुझाएर व्यवसाय गर्दै आएका तिनका घाउमा ग्राहकको सेवा शूल्कमा ५/७ रुपियाँ थप्दैमा मलम लाग्ला त ? बेलुकीपख पुरानो रुटिनअनुसार बत्ती निभ्नै लागेको बेलामा पुतलीसडकस्थित कुमारी ब्याङकसम्मुखको साइबरका सञ्चालक मित्र विद्युत् प्राधिकरणमा फोन सम्पर्क गरी भोलिपल्टको नयाँ रुटिन सोध्दै थिए- 'न्यू प्लाजा बाँसघारीमुन्तिरको लाइनमा भोलि कतिवेला बत्ती आउँछ ?' बत्ती कतिवेला जान्छ भन्ने हिसाब गर्दै आएका हामी आजकाल कतिवेला आउँछ भन्ने विवरण केलाउन लाग्दैछौँ । केटाकेटीमा किंवदन्ती झैँ चकित भावमा कुरा सुनिन्थ्यो- बाब्बै ! विदेशतिरका केटाकेटीहरू त हामीले टालाटुली बटुली खेले जस्तै गरी छिनमै कति सजिलै घडी र रेडियो पो बनाउँछन् रे त ! अहिले खाटमुनि बोरामा कोचिएको त्यही टालाटुली खोज्न पनि हामीकहाँ उज्यालोको उपाय छैन । तब हामी के पो बनाऔँला ? धन्य नेपाली जीवन !
जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल (यो कुरा भट्याउँदा-भट्याउँदा कति थेत्तरो र हलुका बनेझैँ लाग्यो अब त !) मा पिउन लायक पर्याप्‍त पानी त छैन-छैन, नपिउने पानीलाई पनि सिँचाइ र बिजुली लगायतमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । बिजुली नआएपछि जमिनमुनिको पानी सङ्कलन गर्ने कार्य पनि प्रभावित बन्नाले पानी सङ्कटले पनि राजधानीमा मुन्टो उठाएको छ । पानीको अभावमा महानगरवासी सडक-परिभ्रमणमा कामविशेषले वा टहलिन निस्किने क्रममा फुटपाथमा अमिलो-पिरो पानीपुरी खाएर चित्त बुझाउन बाध्य छन् । हुन सक्ने काम पनि हामीकहाँ हुनसकेको छैन । यो धेरै हदसम्म हामी नेपालीको सहनशीलताको परिणाम हो । जे-जस्तै होस् चाहिँदो कुरा र हक-अधिकारको सवालमा चाइँचुइँ छिरिक्कै नबोल्ने/नसक्ने अनि गाडीको पाङ्ग्रामुनि पिसिएर मुसा मर्‍यो भने चाहिँ लैनू भैँसी मरेको स्वर झिकी सडक अवरुद्ध पारेर क्षतिपूर्तिको लागि लाज पचाउँदै दाँत ङिच्याउने ! लोकतन्त्रको असली बहार यस्तै अराजकता मच्चाउने कुरामा आएको छ । नत्र त थर्काउनैपर्ने कुरामा विधि पुर्‍याएर, सडक नओगटी, अरू सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा ठेस नपुग्ने गरी विरोध गर्न र दबाव दिन हामीलाई कहाँ आउँछ र ? अब हुँदाहुँदा स-सानो कुरामा समेत सडक नतताई कतै पनि सुनुवाई नहुने र कामकुरो नसुल्झिने लाठे संस्कार हाम्रै माझमा हुर्किइसक्यो ।
नेपालमा अपार वनसम्पदा (अब त त्यो 'हरियो वन नेपालको धन' उक्ति पनि नसुहाउला) छ, त्यसबाट प्राप्त जडिबुटी अध्ययन-पहिचान-वर्गीकरण गरी औषधिको रूपमा प्याकेजिङ गर्ने बृहत् उद्योग बनाउन नसक्ने हामी । नेपालमा बौद्धिकहरू (निश्चित राजनीतिक वादको पिछलग्गुलाई छाडेर) छन्, तिनको लागि मर्यादित प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन नसक्ने हामी । नेपालमा धावकहरू छन्, तिनलाई मनलाग्दी सिर्जनशील चाल चाल्नको लागि सफा र खुला सडक बनाउन नसक्ने हामी । नेपालमा पानी छ, त्यसलाई बिजुली बनाउन नसक्ने हामी । ....... तब हामी के पो बनाउन सकौँला ???
कालो चश्मा । हो सही हो, कालो चश्मा । पछिल्लो समयमा रत्तिने गरी पाएको धारावाहिक लोडसेडिङको आनीबानीबाट हामीले आविष्कारिक पक्ष पक्कै भेटाएका छौँ । लोडसेडिङको विकराल जालोले हाम्रो स्वप्निल आँखालाई थमाएको कालो चश्माकै पर्दा हो । बिजुली नहुँदा कामकाजी दैनिकीलाई तिलाञ्जलि दिएर सम्पूर्ण ऊर्जा र जाँगर सेलाउँदै कि त बेफ्वाँकमा टहलिन कि त कुवेलामै सिरकमा ओथारो बस्न हामी नागरिकले फुर्सद पाएका छौँ । यस्तोमा अन्धकाररुपी देशाटनमा हामी धपेडीमग्न छौँ । दृश्यावलीको अन्धकारसँगै निराशा र दिक्दारीको अँध्यारो पनि मिसिएको छ । कालो चश्मामा हामी अभ्यस्त हुँदै छौँ, यता हेर्‍यो यतै मैलो, उता हेर्‍यो उतै धमिलो । यस मानेमा कालो चश्मा हाम्रो संस्कृति नभई कसको हुन सक्छ ? हामी विश्‍वलाई यही कालो चश्मा आफ्नो आविष्कारिक वस्तुको रूपमा चिनाउन चाहन्छौँ । त्यसलाई लेवलसहित बजारमा ल्याउनमा हामीलाई कुनै आपत्ति र सङ्कोच छैन । नक्कल गरेको आरोप खेप्नुपर्ला भन्ने पीर पनि छैन, किनकि यो हाम्रो मौलिक रहनसहनको खोजी हो । अर्थात् कालो चश्मा- 'Made in Nepal'.
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, January 15, 2009
दीपक जडित January 15, 2009
तपाईंको लेखाईलाई जोख्ने साहस कहाँ ? यो दिक्कलाग्दो , नैरास्यपूर्ण विषयलाई यसरी सुलुलु कुदाउनुभएको छ ।
साँच्चै कालो मन भएका हामीहरु कालो समयमा कालो राष्ट्र निर्माणमा जुटेका छौं तब चस्मा कालो त लगाउनै पर्यो अझ त्यो पनि Made in Nepal(ablack country )।
मैले त लगाको छु क्यारे
उजेली January 15, 2009
धेरै गज्जबले लेख्‍नुभएको रहेछ । घतलाग्ने गरि !! रमाईलो भयो पढ्न !!
Sadhana Sharma January 15, 2009
तितोकुरामा आधारित भएपनि लेखाइ निकै मीठो लाग्यो मलाई पनि !!
Basanta Gautam January 15, 2009
अत्यन्त मिहिन ढंगले देशभित्रको अराजकता र निराशालाई शब्द दिनुभएको छ। यो तपाईँको आफ्नै जीबनबाट निस्केको हुँदा यसमा सच्चाई, सच्चाई र केवल सच्चाई छ। विदेश बसेर कि-बोर्ड ठोकेर 'राष्ट्रवाद' डकार्ने मलाई आफैंसंग लाज लाग्न थालेको छ अचेल। श्रद्धाले नतमस्तक छु म तपाईँ र तपाईँजस्तै भित्रै संघर्ष गरिरहेका नेपालीहरुप्रति!
हाम्रा नेताहरुले महत्वहीन कुरा गर्न छाडेर, तत्काललाई आफ्नो राजनीतिक चश्मा फुकालेर काम गर्ने हो भने धेरै समस्या कम हुनेथिए। विद्युत र पर्यटनमा एउटा समग्र राष्ट्रिय नीति नहुञ्जेल हाम्रा समस्या उस्ताका उस्तै रहनेछन्
गज्जब लेख पस्किनुभयो। धन्यबाद!
सिकारु January 16, 2009
दीपकजी ले भने झै तपाइको लेखलाई तराजुको काटाले थाम्न् नसक्ने रहेछ रमेश जी ।
कालो चस्मालाई बिषय बनाएर पस्कनुभएको यो देशको यथार्तलाई बुझेर खै कहिले हाम्रा नेताहरुले सादा चस्माले देशलाई हेर्ने हुन?
रमेश जी अघिल्लो पोस्टमा हजुरलाई अर्थ ओकेल्न बाध्य पारेकोमा क्षमा चाहन्छु ल ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) January 16, 2009
"वर्तमान सरकार विगतको सरकारको पुनरावृत्ति होइन, यो भिन्नैखाले परिस्थितिबाट बनेको सरकार हो । प्रतिक्रान्तिकारीहरूले सरकार ढाल्न खोजे त्यसको भोलिपल्ट ठूलो विद्रोह हुन्छ र सत्ता नेपाली जनताले कब्जा गर्नेछन् ।' यिनका नेपाली जनता वाइसीएल हुन् कि को हुन्" - अनि अहिले को सप्ता कसले कब्जा gaरेको जस्तो लागेको छ ???उनीहरूले नै -कुर्सिमा बस्ने बेलामा भनेथे'नि -अहिले नेपाली जनताको जित हो भनेर !! अनि फेरी कस्तो कुरा ओकलेको नि !
- यस्तो सुन्दा मलाइ शेक्सपिएरko भनाई याद आउछ - "राजनितिले जनता मात्र होइन ईशोरलाइ पनी धाट्छ । "
कालो चस्मा त्यो कालो रातलाइ
कालो चस्मा त्यों कालो नितिलाई
कालो चस्मा -देशमा एस्तो प्रोबोलम भित्राउने मठु नेताहरूलाई ।
Jotare Dhaiba January 18, 2009
कुतकुत्याउने टिप्पणीको लागि सबै साथीहरूप्रति ऋणी छु । आलोचना त खै गुम भए जस्तो लाग्यो है ! 
कालोपन आज हामी सर्वसाधारणको लागि बाध्यताको उपज बनेको छ दीपकजी, र ठालु सरोकारवालाहरूको आँखामा चाहिँ यो कालोपन भ्रान्ति, असक्षमता र निर्लज्जताको आवरण भई चढेको छ । सादा आँखाले सादा भावसहित देशको लागि ती फिटिक्कै हेर्न सक्दैनन् । काला मान्छेहरूले छुँदा आज देशै कालो भइसक्यो । जुन महात्माको झोलीमा पनि चक्कु । तपाईँको चश्मा त आम नेपालीको विवश चिन्ह हो दीपकजी ।
उजेली भाइ (यो साइनो अनिल दाइसँगको मेरो आत्मीय नाताले है !) र साधनाजीको मर्मअनुरूप चाह धूमिल हुन नदिने आगामी पलमा पनि चेष्टा गरिरहनेछु । अहिलेलाई यति मात्र भन्न सक्छु ।
अनि वसन्तजीको कुराले त झन् उल्टै उहाँप्रति नै नतमस्तक बनायो । कुनै ज्ञानी मान्छेले म यति उम्दो छु, यति गरेको छु भनेर कहाँ देखाउँछ र ? यही गुमसुम बस्नु नै उसको महानता बन्न जान्छ । विदेशमा बसेर कि-बोर्ड ठोक्ने कुरालाई कति सजिलै रूपमा चित्रण गर्नुभएको नि । त्यस्तो पनि काहीँ होला त ? राष्ट्रवादको मुद्दालाई भौगोलिक सीमाले अलग्याउँछ नै कहाँ ? त्यो भावना रहिराख्‍नु मूल कुरा होइन र ? त्यसो त, देशभित्र रहेरै पनि कतिजना आज गद्दारी गरिरहेका होलान्, के नै कुरा ! भावुकता र संवेदनशीलतावश त्यसरी न्यास्रोपन पोख्‍नुभएको हो भने अर्कै कुरा हो । विदेश बस्नु कुनै पनि देशका नागरिकको लागि रहर होइन भन्ने कुरा त यहाँ तपाईँलाई के खुलाइराखूँ, सङ्घर्ष त विदेशभित्रको देशमा पनि हुन्छ । बाध्यताले विदेश बस्नु एउटा कुरा हो, तर विदेशमा रहेर पनि देशको बारेमा सोचमग्न हुनु, राष्ट्रिय समस्यामा समभाव राखेर सँगै व्यथित हुनु कता हो कता ठूलो कुरा लाग्छ मलाई त, र साँचोमा त्यही नै हो पनि । त्यो गुनिलो रूपमा तपाईँहरूको मूल्यवत्ता हामीले यहाँबाट मनन गरिरहेका छौँ ।
सिकारूजी, देशको पीडालाई स्वानुभूति गरेर कुनै न कुनै दिन हाम्रा नेताको चेत कसो नफिर्ला भनेरै आशा, आशा र फिरि पनि आशा गरेका छौँ, सब्जी बजारको गोलभेँडा जस्तै ती नेतालाई सरक्क फेर्न सकिँदैन, के पो गर्नु । आलोपालो आउने तिनै सीमित अनुहार हुन्, पर्ख र हेर नगरी उपाय नै छैन ।
अनि सिकारूजी, मेरो नाम रमेश होइन है । कि त जोतारे धाइबा भन्नुस्, कि त जीवन कार्की । यिनै दुई नामको जगमा म हिँडिरहेछु । यसो सोच्दा- हुन त नाममा के नै पो छ र, र नामबिना फेरि के नै पो बाँकी रहला र ? अनि अघिल्लो पोष्टमा तपाईँले मेरो नामबारे राख्‍नुभएको जिज्ञासाले त मलाई कत्ति पनि अप्ठेरो लागेन, त्यसरी क्षमा नै माग्नुपर्ने कुरा के थियो र ? कुनै नयाँ र अनौठो कुराप्रति स्वाभाविक रूपमा खुलदुली त बढ्छ नै । बिस्तारै मेटाउनेछु ।
वेदनाथजी, तपाईँको ठम्याइ शत प्रतिशत सही छ । शेषनागलाई समेत माथ गर्ने यिनको जिब्रोको के कुरा गर्नु ! सत्तामा रहेर पनि हालीमुहाली गर्न नपाएर सर्वसत्तावाद हत्याउने दाउमा छन् । राजनीतिले ढाँट्न कसैलाई र कहिल्यै पनि बाँकी नराख्‍ने रहेछ । र पनि, सत्य कुरा सुन्न पाइन्छ कि कुनै दिन ?